Darpan Nepal – बाहुबली- २ चीनमा किन चलेन ?
बाहुबली- २ चीनमा किन चलेन ?
May 12, 2018Admin123Bollywood, Movie News0Like
भारतमा बक्स अफिसको सारा रेकर्ड तोडेको एसएस राजमौलीको ‘बाहुबली– द कन्क्लुजन’ चीनमा भने असफल भएको छ । पहिले चीनमा इन्डियन फिल्म जति रुचाइन्थ्यो, त्यसको अनुपातमा चिनियाँले यो फिल्म निकै कम रुचाएका छन् । फिल्म प्रदर्शन भएको चौथो दिन पनि त्यति राम्रो व्यापार हुन सकेको छैन ।
फिल्मले १६ करोड भारुको ओपनिङ गरे पनि दोस्रो दिनबाट व्यापार ओरालो लागेको हो । चार दिनको अन्तरालमा फिल्मले जम्मा ५८ करोड भारुको व्यापार गरेको छ । यो कमाइ केही समयअघि रिलिज भएको आमिर खानको दंगल र सेक्रेट सुपरस्टार, हिन्दी मिडियन तथा बजरंगी भाइजानभन्दा एकदमै कम हो ।
अघिल्लो वर्ष रिलिज भएको बाहुबलीले भारतमा सबै रेकर्ड तोडेको थियो । चीनमा ७ हजार हल पाएर पनि बाहुबलीले सोचेअनुरूप व्यापार गर्न सकेन । फिल्ममा प्रभास, राना दग्गुबत्ती, अनुष्का सेट्टीलगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।
Previous Postपाल्पामा भेटियो अनौठो गुफा, हेर्नेको भीड लागेपछि बन्द गरियो Next Postजनकपुरबाट छुटेको बस अयोध्या पुग्यो, अयोध्यामा गरियो भब्य स्वागत